UBUNINI BOMBUTHO: YINTONI NOKUBA ISETYENZISWA NINI?
Ukuba unamathandabuzo malunga nokuba impahla edibeneyo kwaye isebenza njani, ke eli nqaku lelakho. Siza kuchaza yonke into oyifunayo ukuze ukwazi ukwenza imisebenzi yakho yokudibanisa ngendlela elula. Kuya kuba mnandi!
1 Ipropati edibeneyo Yintoni na?
2 Yenziwa njani?
2.1 Ipropathi yokudibanisa ngokudibanisa
2.2 Indibaniselwano ngokudibanisa
2.3 Ukuthabatha kunye nokwahlulahlula
2.4 Ukuqonda iipropathi zokudibanisa kunye nokudibanisa
2.5 Ukuqonda iipropathi zokudibanisa kunye nokuphinda-phinda
2.6 Iyintoni ipropathi yokuhlanganisa?
Ipropati edibeneyo Yintoni na?
Usenokuba ukhumbule xa babekwisikolo samabanga aphantsi, ababethetha ngaso Ipropathi yokutshintshiselana kunye nokudibana; Ewe, kule meko, ipropathi yokudibanisa yipropathi ye-algebra esebenza kuphela ukongeza kunye nokuphinda-phinda, kwaye ngaphandle kokulandelelana kokufunyanwa kwezinto ezisetyenziswayo, isiphumo siyakufana. Ukugxininisa ukuba uku-odolwa kwamanani akunanto yakwenza neziphumo zokugqibela zomsebenzi.
Ukusebenza ngaphakathi kwabazali ngabokuqala ekufuneka sikwenze macala omabini. Ke xa umntu ngamnye ebulawa, siyabasusa abo bazali kwaye sijoyine amanani. Ngale ndlela, siya kufumana iziphumo zokugqibela.
Ipropathi yokudibanisa ngokudibanisa
Ukuba siqhubeka ukongeza, siyabona ukuba iodolo yezongezo ayichaphazeli imveliso esiyifumanayo. Umzekelo: (A + B) + C = A + (B + C).
Kule meko, sinokubonisa ukulingana okuchazwa yipropathi yokudibanisa, ngolu hlobo lulandelayo:
a) (2 + 5) + 3 = 2 + (5 + 3) b) (10 + 15) + 6 = 10 + (15 + 6) c) (50 + 35) + 8 = 50 + (35 + 8) )
Kubalulekile ukuba ukhankanye ukuba imveliso yokugqibela kufuneka isoloko ifana, ngaphandle komyalelo wokongezwa.
Inkqubo iyafana, kuphela kukuba umsebenzi osetyenzisiweyo wokufumana iziphumo zokugqibela wahlukile, kuba endaweni yokongeza, sizakuphindaphinda amanani esisebenza nawo.
Ngendlela efanayo, kule meko, siza kubonisa ukulingana okuqulathiweyo:
a) (3 x 2) x 6 = 3 x (2 x 6) b) (5 x 2) x 2 = 5 x (2 x 2) c) (9 x 3) x 5 = 9 x (3 x 5) )
6 x 6 = 3 x 12 10 x 2 = 5 x4 27 x 5 = 9 x 15
Njengoko besinokubona kwimithambo eyahlukeneyo, ucwangco lwezinto aluchaphazelanga iziphumo zokugqibela kwaye sikwazile ukufumana ukulingana okusetyenzisiweyo kwipropathi yokudibanisa.
Amaxesha amaninzi, kuvela amathandabuzo malunga nokuba imisebenzi enxulumene nepropathi inokwenziwa kusetyenziswa imisebenzi enjengokuthabatha kunye nokwahlulahlula. Kuya kufuneka sicacise ukuba ukuthabatha kunye nokwahlula-hlukana akuhambelani nobumbano, kuba aluzalisekanga (ngenxa yoko kwisiphumo sokugqibela asiyi kufumana ukulingana).
Masibeke ezi zinto zilandelayo njengomzekelo wokuthabatha:
Masibeke lo mzekelo wokwahlula:
Singaqaphela ukuba ipropathi edibeneyo ayizalisekanga, kwaye asifumani ukulingana phakathi kwabo. Ke ngoko, sinokuthi, kokubini ekuthabatheni nasekwahlulweni, akukho buhlobo nepropati esiyicebisayo.
Ungayizama ngamanani owafunayo, kodwa akukho manyano uya kufunyanwa.
Ukuqonda iipropathi zokudibanisa kunye nokudibanisa
Siza kubeka utyando lwe impahla edibeneyo: imizekelo, ekulula ukuba uchonge kwaye wenze ngokudibanisa izinto zayo:
a) Kwibhaskithi yeziqhamo sineeorenji ezi-5, iibhanana ezi-2 kunye neeplamu ezili-10.
Siza kuqhubeka noku-odola ukusebenza ngokudibeneyo kwepropathi. Sibeka iiorenji ezi-5 kuqala, kulandele iibhanana ezi-2, ekugqibeleni, ii-plums ezili-10 ngolu hlobo lulandelayo:
Ngoku siza kuqhubeka nokongeza ubungakanani obungaphakathi kubazali, nje ukuba siyenzile, aba bazali bayanyamalala:
Sele sisebenza ekugqibeleni, ngoku siza kudibanisa yonke into:
Sifumene ukulingana okuqulathwe kwipropathi yokudibanisa. Umsebenzi omhle!
Ukuqonda iipropathi zokudibanisa kunye nokuphinda-phinda
Siza kubeka utyando lwe impahla edibeneyo - imizekelo, onokuyenza ngendlela elula:
b) Iilori ezimbini zifikile esikolweni ezineebhokisi ezili-2 inye, ngaphakathi kwebhokisi nganye kukho iibhola ezisi-10. Singaqhubeka njani nokwenza umsebenzi wokudibanisa ipropathi kule datha?
Kuqala siza kuyala idatha ngale ndlela ilandelayo:
Kuqala siza kubhala inombolo yesi-2 (yeelori), emva koko sisebenzise inombolo eyi-10 (kwiibhokisi ezikwilori nganye), size ke ekugqibeleni sibhale eziyi-8 (iibhola ezingaphakathi kwezi bhokisi):
b) (2 x 10) x 8 = 2 x (10 x 8)
20 x 8 = 2 x 80
Iziphumo zokugqibela zi-160 = 160 njengokulingana. Ke, sinokuqinisekisa oku kulandelayo: Isikolo sifumene iibhola ezili-160 zizonke.
Kumnandi kakhulu ukwenza le misebenzi. Umsebenzi omhle!
Masibeke omnye umzekelo:
c) Kwivenkile enkulu, ilori e-1 ifikile, ineebhokisi ezi-6, kwaye ibhokisi nganye ineephakeji ezili-12 zetshokholethi. Singazi njani ukuba zingaphi iitshokholethi xa zizonke?
Siza kuqhubeka ngolu hlobo lulandelayo:
Kufuneka si-odole idatha esinayo. Kuqala inani u-1 (elorini), emva koko inani u-6 (ngenani leebhokisi), size ekugqibeleni sibeke inani u-12 (elimele iitshokholethi ezikwibhokisi nganye). Siza kuyibhala ngolu hlobo:
c) (1 x 6) x 12 = 1 x (6 x 12)
6 x 12 = 1 x 72
Sifumene i-72 njengokulingana okuqulathiweyo kule nkqubo yokudibanisa ipropathi. Kakuhle kakhulu!. Ke sinokuthi ilori ithumele iitshokholethi ezingama-72 kwivenkile enkulu, yahlulwe yaziibhokisi ezi-6. Umsebenzi omhle!
Iyintoni ipropathi yokuhlanganisa?
Ukusebenza apho kusetyenziswa khona ipropathi yokudibanisa kuyasivumela ukuba senze lula isiphumo esifuna ukusifumana, kuthintelwe ukwenza iinkqubo ezinde kunye nezidinisayo.
Kwaye okona kulunge ngaphezu kwako konke, kukuba sinoku-odola izinto esiza kuzisebenzisa ukwenza ipropathi yokudibanisa, ngendlela esifuna ngayo, kuba ukuzitshintsha akuyi kuchaphazela imveliso yokugqibela.
Nceda uzame ngezi ndlela zilandelayo:
d) Kwindlu kaJuana sineebhokisi ezimbini ezinezinto zokudlala ezili-2 ngaphakathi kwento nganye. Singawenza njani umsebenzi wethu ukuze siqonde iipropathi zokudibanisa?
Kuqala sibeka inombolo 1 (emele uJuana), emva koko inombolo yesi-2 (yeebhokisi anazo), kwaye ekugqibeleni, inombolo ye-15 (yeethoyi ezingaphakathi kwebhokisi nganye).
Ungaqala ukuyilolonga ngolu hlobo: (1 x 2) x 15.
Kwaye uqhubeka noku-odola ngoluhlobo: 1 x (2 x 15).
Xa usenza lo msebenzi, iziphumo kufuneka zisibonise ukudityaniswa okubandakanyiweyo kuzo. Jonga:
(1 x 2) x 15 = 1 x (2 x 15)
2 x 15 = 1 x 30
Sifumene inani elilinganayo ngama-30. Ke ngoko, sinokuqinisekisa oku kulandelayo: UJuana unezinto zokudlala ezingama-30 zizonke, kwiibhokisi zakhe ezimbini. Umsebenzi omhle!
Ngalo msebenzi wokusebenzisa ipropathi yokuhlangana, siqwalasele indlela esinokufumana ngokulula ngayo iziphumo zokugqibela, ngaphandle kwenkqubo ende.
Zama ukuzilolonga ngeendlela ezahlukeneyo ekhaya, khumbula ukuba ukuziqhelanisa kuya kusivumela ukuba sifunde ngokukhawuleza kwaye imisebenzi ibe mnandi.
Ndwendwela eli khonkco ukuba ufuna ukufunda ngendlela elula Ukudibana, ukuHanjiswa, kunye nePropathi yePropathi yoPhindaphindo.